Ihe rissagas: ihe ọ bụ na otu esi amalite | Netwọk Mgbasa Ozi
Na onu mara aha rissaga Ọ bụ ihe omume na - eme na ndagwurugwu na ọdụ ụgbọ mmiri ndị dị na Islands Balearic. Enwere ike ịtụgharị ya n'asụsụ Spanish dị ka mmanya na-egbu egbu. Ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị nke na-agụnye oscillations dị iche iche na oke osimiri nke nwere ike iru mita 2 n'obosara na oge naanị 10 nkeji. Ọ bụghị ihe pụrụ iche n'àgwàetiti a, mana ọ bụ eziokwu na ọ na-eme ọtụtụ oge.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị njirimara niile, mmebi na ugboro ole rissagas na-eme.
1 Kedu ihe bụ rissagas
2 Ihe na-akpata rissagas
4 Oge jikọtara rissagas
Kedu ihe bụ rissagas
Aha a bụ n'ihi ihe omume na-eme na oke oge na Balearic Islands. Ọ bụ ezie na ọ bụghị naanị na saịtị a, ọ na-ewere ọnọdụ n'ime n'ọdụ ụgbọ mmiri Ciutadella n'obodo agwaetiti Menorca.
Mgbe ihe ịtụnanya a mere na ọ na - egosipụta onwe ya dịka ndapụ na mmiri n’ọdụ ụgbọ mmiri na mberede. Site na ndagwurugwu a, ọdụ ụgbọ mmiri niile fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe efu na nkeji nkeji. N'ihi ya, ụgbọ mmiri nke ndị ọkụ azụ na-emetụ ala na ọtụtụ n'ime azụ na-anwụ site na nsị. Agbanyeghị, mpaghara ndị ọzọ nke ọdụ ụgbọ mmiri ahụ adịghị efu kpamkpam mana ị nwere ike ịhụ nnukwu ọdịda na ọkwa mmiri. Nke a na-eme ka ọtụtụ ụgbọ mmiri tọrọ atọ nwa oge.
Nkeji ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị, mmiri ahụ laghachiri ọzọ na ọdụ ụgbọ mmiri ọzọ na nke a na-eme ka ụgbọ mmiri niile na-awagharị ma na-akụ ibe ha. Tụkwasị na nke ahụ, ọtụtụ ụgbọ mmiri ahụ na-emikpu ma na-ebibi ihe n'ozuzu ha. N'oge ụfọdụ, anyị na-ahụ ọtụtụ mmiri na-ebute ụfọdụ idei mmiri na mpaghara ndị dị nso n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ. N'ime nnukwu mmiri ndị a anyị hụrụ mmetụta dị ukwuu n'ụgbọala na ogige ndị dị nso n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ.
Nọmalị a onu na-ugboro ugboro cyclically ruo ọtụtụ awa. Mgbe ụfọdụ a chọta rissagas ọtụtụ oge n'otu ụbọchị.
Ihe na-akpata rissagas
Dika aturu anya, ihe omuma a bu ihe iju anya ma gbaliri ichota ihe kpatara ya. Ihe omuma a amarala kemgbe oge ụfọdụ, ọkachasị na Ciutadella. E nwere ụfọdụ amaokwu na-ekwu maka ọdịda nke ụgbọ mmiri na ọdụ ụgbọ mmiri Ciutadella na narị afọ nke XNUMX. Ma nke a bụ na ebili mmiri ndị a niile nwere oke pụrụiche na-apụta n'ime obere oge.
Dị ka ọ dị, a na-eburu n'uche na njupụta nke mbara igwe nke mbara igwe na-enwekarị ihe dịka 20 centimita na oge nke ọtụtụ awa. Ihe a bụ ihe anya na-anaghị ahụ. Otú ọ dị, rissagas sitere na amplitudes nke ihe karịrị 2 mita n'ogologo naanị n'ime oge 10.
Amabeghị mmalite nke rissagas ruo oge ndị na-adịbeghị anya mgbe enwere ịmatakwu banyere ihu igwe na ọrụ nke ebili mmiri. Echere na mmalite rissagas nwere ike bụrụ kpakpando. Nke a pụtara na o nwere ụdị ọrụ yiri nke ebili mmiri. Echere na ọ nwere ike ịnwe ala. O nwere ike ime n'ihi ala ọma jijiji n'okpuru mmiri nke na-ebupụta ebili mmiri dị iche iche nke ga-abawanye iji rute n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ. Otú ọ dị, Nkwupụta echiche ndị a niile siri ike iji nwee ike ịkọwa ihe ịtụnanya ọkachasị. Obere nke enwere ike ịkọwa bụ ọtụtụ ugboro ihe a na-eme n'ogige a ọ bụghị na ndị ọzọ.
A maara ezi ihe kpatara ya na 1934, mgbe ọmụmụ dịgasị iche iche gbasara mgbanwe pụrụ iche na oke osimiri. Nnyocha na-egosi na ihe na-akpata rissagas bụ ikuku. Nnukwu mgbanwe mberede na oke osimiri na-esonye na ngbanwe ndị ọzọ na mberede na nrụgide nke ikuku. N'ihe banyere Ciutadella na a na-emepụta Balearic Islands n'ihi mmekọrịta dị n'etiti ikuku na oké osimiri. Authorsfọdụ ndị na-ede akwụkwọ na-eche banyere tiori na rissaga sitere na mmetụta nke ebili mmiri ndọda nke na-eme n'etiti ọkwa nke troposphere. Ebili mmiri ndọda ndị a na-ewere ọnọdụ n'ihi ikuku ikuku n'ihi oscillations na nrụgide nke ikuku karịa na ọkwa elu.
Ọnọdụ ikuku dị iche iche dị iche iche nke na-akacha mma iji kwalite rissagas. Ọnọdụ ikuku atọ kachasị mma maka ọdịdị nke ihe a bụ ihe ndị a:
Ekwesịrị inwe ifufe ndịda ọdịda anyanwụ siri ike n'etiti na ọkwa dị elu nke troposphere. Ifufe ndị a ga-efegharị n’ihu ọdọ mmiri miri emi nke na-emetụta Ala Iberia.
Site na ọkwa dị n'okpuru mita 1500 A ga-enwerịrị ogo ikuku dị mma nke na-akpata ịdị adị nke okpomọkụ siri ike dị n'etiti ọkwa a na ikuku dị n'elu oke osimiri. Ikuku n’elu oké osimiri ga-ajụ oyi karịa nke a.
A ga-enwerịrị ifufe na-esighi ike ma ọ bụ nke na-adịchaghị agafe na-asọba n'elu.
Ọnọdụ ikpeazụ a ma ọ bụrụ na ị gosipụtara na nso nso a na ọ dịghị mkpa ka rissagas mee. A hụla rissagas site na ifufe site na ndịda ma ọ bụ ndịda ọdịda anyanwụ n'elu. Ndị ọkachamara n'ihe gbasara ihu igwe na Mediterranean kwubiri na ọnọdụ ikuku ndị a dị mma maka rissagas na-eme n'oge ọkara ọkụ nke afọ. Ya mere, nke kachasị elu nke ihe a na - eme n’agbata Eprel na Ọktoba.
Oge jikọtara rissagas
Otu n'ime ihe ndị bụ isi a ga-eburu n'uche maka amụma nke nlekota nke rissagas bụ ihu igwe nke ikuku na-egosipụta ọnọdụ ndị a. Na ụbọchị na ndị na-emepụta rissagas na mbara igwe na-ekpuchikarị ebe ndị gbara okirikiri na nke opaque. Nọmalị ọ dị obere na igwe ojii dị n'okpuru, mana ọ bụ njirimara igwe nke igwe ojii na acha edo edo maka igwe ojii. Haze ahụ dị ka uzuzu nke si n'Africa dị na mpaghara a.
N’oge ndị ọzọ enwere igwe ojii ole na ole na - agbasasị agbasaghị nke na - egosighi ngagharị dị mkpa.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu ihe gbasara rissagas.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Rissagas